Xuska 55 guurada ciidanka Xoogga Dalka oo ka socoto Muqdisho iyo gobollada dalka – Radio Muqdisho
Xuska 55 guurada ciidanka Xoogga Dalka oo ka socoto Muqdisho iyo gobollada dalka
Qaban qaabada munaasabad balaaran oo loogu dabaal-degayo Xuska Aas Aaska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo ku Asteysan 12-ka April ayaa ka socota xarunta Wasaaradda Difaaca Soomaaliya, iyadoo aad loo adkeeyay ammanka magaalada Muqdisho.
12-ka April sanadkii 1960 ayay ahayd markii la aas aasay ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana xuska 55 guurada ee ciidanka xoogga lagu wadaa inay ka qeyb galaan Madaxda ugu sareysa dalka, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale.
Fanaaniinta ciidanka xoogga dalka ayaa goobta ku soo bandhigay suugaan ka hadlayso waxqabadka ciidanka xoogga dalka.
Mas’uuliyiin dhowr ah ayaa lagu wadaa inay ka hadlaan taariikhda ciidanka xoogga dalka iyo caqabadaha hor taagan xilligan.
Sidoo kale Munaasabado tan la mid ah ayaa waxa ay ka socdaan qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasi oo lagu weyneynayo xuska maalintii la aas aasay ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo 55 jirsaday.
RW Cumar oo hambalyo ku aadan xuska 12 April u diray Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed